အဲလ်တန်ဂျွန် - "ကိုကင်းကငါ့ကိုနဂါးဖြစ်စေတယ်"! - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် အဲလ်တန်ဂျွန် - "ကိုကင်းကငါ့ကိုနဂါးဖြစ်စေတယ်"!
အဲလ်တန်ဂျွန် - "ကိုကင်းကငါ့ကိုနဂါးဖြစ်စေတယ်"!
တေးဂီတဆိုင်ရာဒဏ္tonာရီဆန်ဒ Elton John သည်သူမဘဝ၏စွဲလမ်းမှုနှင့်သူမ၏ဆက်ဆံရေးအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
70 နှင့် 80 နှစ်များအတွင်း A အမျိုးအစားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းအားဖြင့်သူလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုတော်က ၀ န်ခံသည်။ တာဝန်မဲ့နှင့် egocentric သူဟာ Rolling Stones ဖျော်ဖြေပွဲကိုဖျက်စီးပြီးဟိုတယ်ခန်းတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်။
Daily Mail တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောသူ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိအသစ်တွင်အယ်လ်တန်သည်သူ 1974 တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခဲ့သည်ကိုအမှတ်ရနေသည်။
72 နှစ်၏အဆိုတော်ကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်နေထိုင်ရာရပ်ကွက်များ၌မှတ်ချက်များကိုဆွဲဆောင်ရန်လုံလောက်သောဤအရာများအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အစာစားချင်စိတ်ရှိခဲ့သည်။ ငါ 70 နှစ်များတွင် LA ၌အချိန်များစွာကုန်လွန်ခဲ့သည့်ရော့ခ်ကြယ်ပွင့်တစ် ဦး ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသောစွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် "။
ဇွန်လ 1983 တွင်ကိန်းမြို့၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ဖော်ပြ၍ အဲလ်တန်သည်သူ၏လက်ထောက်အခန်းကိုလုယက်ဖျက်ဆီးလိုက်သည့်အံ့ an ဖွယ်ရက်နာမှုနှင့်နိုးထနေခြင်းကိုပြောပြခဲ့သည်။
« အိပ်ရာမှတပါးနဂိုအတိုင်းပရိဘောဂတစ်ပိုင်းမျှမရှိ။ အခြားအရာအားလုံးလုယက်ခံခဲ့ရသည်။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ »
ထို့နောက်သူသည်ဟိုတယ်၏ lob ည့်ခန်းတွင် Duran Duran Duran အပေါ်မည်သို့ကျရောက်ခဲ့ပြီးသောက်ရန်သူတို့နှင့်အတူလိုက်ခဲ့ပုံကိုရှင်းပြခဲ့သည်။
Elton သည် martinis vodkas ရှစ်ခုသောက်ခဲ့ပြီးတစ်နာရီခန့်အကြာတွင်သူ၏မန်နေဂျာနှင့်ချစ်သူများဟောင်း John Reid ကိုမသောက်မီ coke အနည်းငယ်ကိုစားသုံးခဲ့သည်။
အဆိုတော်၏လက်ထောက် Bob Halley ကသူ့အားသူ့အိပ်ခန်းထဲသို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ သို့သော်သူအိပ်ရာဝင်ခဲ့ရသည်ကိုသူဒေါသထွက်ခဲ့သည်။
« သူ့ရဲ့ဟိုတယ်အခန်းကိုဖျက်ဆီးခြင်းအားဖြင့်သူရဲ့ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုကျွန်တော်မကျေနပ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် "။
မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဖရိုဖရဲဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင်အဲလ်တန်ဂျွန်သည် Rolling Stones မှ Keith Richards ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကိုအမှတ်ရမိသည်။ သူသည်ကော်လိုရာဒိုတွင်ပြုလုပ်သောဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုအတွက်အဖွဲ့ထဲဝင်ရန်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသည်။
အကယ်၍ သူသည်အရက်၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်မရှိခဲ့ပါကသူသည် Honky Tonk အမျိုးသမီးများနှင့်ကစားပြီးလူစုလူဝေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာသွားကြောင်းအချက်ပြခဲ့သည်။
« အဲဒီအစား၊ ငါကဒီအခြေအနေကောင်းနေပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး Stones တွေကိုသူတို့အရန်ကီးဘုတ်လိုချင်လားလို့မမေးဘဲနဲ့စင်ပေါ်မှာနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ Keith Richards ကကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ သူကကျွန်တော့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကိုသူသဘောကျသွားလို့ပါ။ သီချင်းအနည်းငယ်အပြီးတွင်သူ၏မျက်နှာ၏ဖော်ပြချက်သည်တကယ့်ကိုတေးဂီတတန်ဖိုးထားလေးနက်မှုကိုမဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းနောက်ဆုံးကျွန်တော်သဘောပေါက်ခဲ့သည် "။
« ငါမြန်မြန်ပြေးထွက်သွားတော့ Keith ကငါ့ကိုကြည့်နေတုန်းပဲ၊ နောက်မှပြန်ပြောပြမယ့်နည်းနဲ့ငါကြည့်နေတယ်။ ငါ post-show ပါတီမှာမနေဘူးဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ".
« ဒါကပြproblemနာပဲ။ ငါကိုကိုသောက်နေတုန်းငါဟာဆင်ခြင်တုံတရားရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူး။ သင်ဟာမဆင်ခြင်နိုင်တဲ့၊ "။
တော်ဝင်ပုဂ္ဂလိကဘဝ၏နှလုံးသား - ဘုရင်မအား "သူမရဲ့ကံမကောင်းမှုတွေရဲ့ဗိသုကာ" လို့အမည်ပေးခဲ့တယ်
Zara Tindall ၏ခင်ပွန်းသည် Instagram ရှိတော်ဝင်မိသားစုကိုမလိုက်သောအကြောင်းရင်းအမှန်